के तपाईंलाई थाहा छ कति सुधार गरिएको ग्यालक्सी नोट7लागत लाग्नेछ? | Androidsis
के तपाईंलाई थाहा छ कति सुधार गरिएको ग्यालक्सी नोट7लागत लाग्नेछ?
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | मोबाईलहरू, Samsung
विश्वमा यसको परिचय भएकोले, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट many धेरै चीजहरूको लागि बाहिर उभियो। यो शारीरिक रुपले आकर्षक स्मार्टफोन हो। तर यो मात्र होईन। यो बजार हावी गर्न सामसु'sको ठूलो शर्त थियो। र यो किनभने यो वास्तव मा एक गुणवत्ता उत्पादन प्रदान गर्दछ।
ग्यालक्सी नोट7हाइप सिर्जना गर्‍यो जुन एक अविश्वसनीय टर्मिनलको योग्य छ। A Q.5,7 इन्चको स्क्रीन जसले यसको QHD को साथ आँखालाई चकित बनायो। १153 x .73,9 7,9. x x XNUMX मिलिमिटरको आकारमा। Un आईआरआई स्क्यानरहो, केहि चीज जुन पछि अरूले पनि प्रतिलिपि गर्न चाहेका थिए। रसब भन्दा सब भन्दा उन्नत र सटीक S Pen.
1 ग्यालक्सी नोट R आर, एक "शीर्ष" स्मार्टफोन एक मध्य-दायरा मूल्यमा
2 के तपाईं "खतरनाक" मानिएको स्मार्टफोन किन्नुहुन्छ?
ग्यालक्सी नोट R आर, एक "शीर्ष" स्मार्टफोन एक मध्य-दायरा मूल्यमा
के कोरियन फर्म को लागी वर्ष को हिट हुने वाचा गरे यो सबैभन्दा खराब सपना साबित भयो। सुरुमा, जब को समाचार विस्फोट र दहनतिनीहरूले इन्टरनेटमा आक्रमण गरे, हामीले आफैलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्यौं। के सैमसंग यसको परीक्षणको साथ केही लापरवाह छ? के मार्केटमा पुग्न भीड उनीहरूलाई सक्षम भएको छ?
तर जब हामी आधिकारिक रूपमा निलम्बन गरिएको थियो हामी मध्ये धेरैले आश्चर्यचकित भयौं। वितरणको लागि तयार भएका धेरै टर्मिनलहरूसँग उनीहरू के गर्छन्?। सुरुबाट नै अनुमान लगाइएको थियो कि यसको अंशहरू भविष्य टर्मिनलको लागि प्रयोग हुनेछ। तर अलि अलि गर्दै, र समय बित्दै, पुनः रिकन्डेसन गरिएको मोडेलको विचारले बल प्राप्त गर्दै थियो।
यो सामान्य छ कि सामग्रीहरूमा यति धेरै लगानी फ्याँकिएन। Y महिनौंसम्म यी "अनफिट" स्मार्टफोनहरूको भाग्य अज्ञात थियो। हामीले भर्खर समाचार सुनेका थियौं सामसुले ग्यालक्सी नोट 7, ग्यालक्सी नोट R आर का एक पुन: शर्त संस्करण बनाउनेछ। र त्यहाँ बिक्री मूल्य को बारे मा धेरै अनुमानहरु छन् कि यो उपकरण पुग्नेछ।
अब हामी यो जान्न सक्षम भएका छौं यसको बजार मा यसको मूल्य करिब 400०० डलर हुनेछ। त्यसोभए बिभिन्न शंका र प्रश्नहरूले हामीलाई आक्रमण गर्छन्। के तपाईं खतरनाक मानीएको मोडेलको पुन: शर्त स्मार्टफोन किन्नुहुनेछ? उत्तर हो हो। ध्यान दिनुहोस् नोट offer ले के प्रस्ताव गर्न सक्दछ र बिक्रीमा जान्छ कि मूल्यमा त्यहाँ केहि विकल्पहरू छन् जुन यसलाई ओझेलमा पर्दछ।
के तपाईं "खतरनाक" मानिएको स्मार्टफोन किन्नुहुन्छ?
यदि हामीले यसको विशिष्टता र यसको मूल्यमा ध्यान दियौं भने, एक र अर्कोको बिचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानौं, निश्चित रूपमा, यो नोट R आर अब खतरनाक हुनेछैन। र यो पनि हुनेछ खाता मा लिएर, अनिवार्य छ, यसको सम्बन्धित ग्यारेन्टीहरु। हामीलाई लाग्छ कि यो एक ठूलो अवसर हो।
महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको रूपमा मूल मोडेल र यस संस्करण बीचको बाहिर खडा छ ब्याट्री। एउटा जुन सामसु'sको सबैभन्दा खराब सपनाहरूका लागि दोषी थियो। यो स्वायत्ततामा हराएको छ तर यो सुरक्षामा प्राप्त भएको छ, र जे देखिएको छ देखिएको छ, यो यसको लागि लायक हुनेछ। हामी प्रारम्भिक 3.500०० एमएएच बाट करिब 3.200,२०० एमएएचमा गयौं कि तिनीहरू कुनै पनि खराब छैनन्।
एन्ड्रोइडको version.० नौगटको पछिल्लो संस्करण समावेश गर्नका साथै। नोट R आर GB जीबी र्याम र यसको Exynos4s ० प्रोसेसर राख्छ। साथै यसको फ्रन्ट र रियर क्यामेरा पनि। यस उपकरणको लागि चासोको लागि पर्याप्त कारणहरू भन्दा बढी। तिमीलाई लाग्दैन?
ठिक छ, यदि तपाईं आश्वस्त हुनुभयो र तपाईं यो नोट have आर लाई नयाँ स्मार्टफोनको विकल्पमा हुन सक्नुहुनेछ, नराम्रो खबर। यस्तो देखिन्छ कि यस वर्षको सबैभन्दा चर्चित स्मार्टफोनको पुन: कन्डिशन गरिएको संस्करण यो यूरोपमा बेच्ने छैन, कम्तिमा अहिलेको लागि।
जहाँसम्म हामीले सिकेका छौं, यी नयाँ नवीकरण गरिएको उपकरणहरूको इकाईहरूको अन्य लक्षित बजार छ। यद्यपि सुरुमा यो युरोपियन बजार र अमेरिकनका लागि फेरि यस उपकरणमा विश्वास गर्न गाह्रो देखिन्थ्यो। पर्याप्त मूल्यमा गिरावट तपाईंलाई दोस्रो मौका दिनको लागि ठूलो प्रोत्साहन हुने थियो। र यस्तो देखिन्छ कि यो भयो किनकि यो यसको मूल्य के हुनेछ भनेर थाहा भइसकेको छ।
मूल्य कटौती एकैपटक, यस्तो देखिन्छ कि सामसु itsको यसको ठाँउमा अन्य उद्देश्यहरू छन्। स्पष्ट रूपमा, यस क्षणको लागि यसले यी नयाँ नोट R आरलाई अवस्थित बजारमा बिक्रीमा राख्नेछ। देशहरू मन पराउँछन् भारत वा भियतनाम मुख्य गन्तव्यहरू हुनेछन् जहाँ सामसुले यी पुन: शर्तहरूको बिक्रीको साथ शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। के यी उपकरणहरू यती आकर्षक र मूल्य र प्रदर्शन मा युरोप पुग्छन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » के तपाईंलाई थाहा छ कति सुधार गरिएको ग्यालक्सी नोट7लागत लाग्नेछ?
हुवावेले मेट9लाई दुई नयाँ मूल रंगमा शुरू गर्‍यो
उत्तम एन्ड्रोइड कुनै पनि एन्ड्रोइडमा एज प्यानल्स नक्कल गर्न वा मौलिक सामसु ofको विकल्प सुधार गर्न